Sida loo sameeyo galkaaga wareega (Iyadoo aan lahayn Jeel Jebin) | Wararka IPhone
Sida loo sameeyo galkaaga wareega (Iyadoo aan lahayn Jailbreak)
Nooc kasta oo nidaam ah wuxuu keenaa cilladahiisa, mararka qaarkood cayayaankaani waa wax dhib leh waxayna keenaan cayayaanka sii xumeynaya khibrada isticmaalaha, kuwa kale ayaa xiiseynaya oo u oggolaanaya isticmaalaha sameyso waxyaabo aadan awoodin inaad sameyso, markan waxaan u imid inaan kaaga waramo xaalada labaad.
Fiidiyowga caanka ah ee Vdebarraquito (oo helay sida looga helo macluumaadka shakhsiga ah ee loo maro Siri) ayaa helay hab gaar ah oo looga faa'iideysto cayayaanka ku jira iOS 9.3 iyo 9.3.1 oo u oggolaanaya adeegsadaha wax ka beddel muuqaalka fayllada sidaa darteed kuwani waa kuwo wareegsan oo aan laba jibbaarneyn, dhammaantoodna aan khatar lahayn, ma waxaad dooneysaa inaad ogaato sida?
Qaabku wuxuu umuuqdaa mid fudud oo adag isla waqtigaas, waana inuu ku saleysan yahay guuldarro markii laga shaqeynayay warqad xaddidan oo hooseysa, iyadoo sidaas la sameynayo, natiijadu waa wax aan la fileynin maadaama aan kaliya la helin faylalka wareega, laakiin waraaqaha la helo u eg mid u qalma asalka xalka sare, kaas oo qalabkeena siinaya muuqaal aad u fiican, marka lagu daro taas taabasho gaar ah.
Si aad u fuliso khiyaanadan, si fudud u raac tallaabooyinka aad ku arki doonto fiidiyaha soo socda:
Ku soo dejiso sawirada adoo maraya xidhiidhkan.
Sidaad arki karto, howshu waa mid aad ufudud, cillada kaliya ee jirtaana waa inaad ubaahantahay beddel gidaarka, inkasta oo aysan ahayn mid aan dhib badnayn sidoo kale, maaddaama mareegaha aan ku hayno saddex bog oo leh midab midab leh ama midabbo badan leh, oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka.
Si aad u soo dejiso sawirada waa inaan kaliya ku dheji iyaga illaa aan ka aragno ikhtiyaarka aan ku badbaadin karno cirifkayaga, oo hal marna waa inaan u dhignaa sida gidaar (aan aragti lahayn) shaashadda gurigeenna.
Waa in la ogaadaa in faylku ku yaalliin sadarka ugu horreeya ee astaamaha bog kasta ee sabuuradda (desktop) wax saameyn ah kuma yeelan doonto, taasi waa, astaamaha ugu horeeya ee codsi ee bog kasta sii wadi doonaan inay ilaaliyaan muuqaalkooda fayl laba jibbaaran, inta hartay ee faylku waxay noqonayaan kuwo wareegsan, inkasta oo kaliya ay ku jiraan thumbnail, tan iyo markii aan gujino iyaga ayay si caadi ah u furi doonaan.
Cayayaankaasi ma ahan wax khatar ah, mana luminin dib udajinta nidaamka ama wax la mid ah, waxa kaliya ee looga baahan yahay ayaa ah in la ilaaliyo waraaqda laga soo dejiyo websaydhkaas, hadii aan rabnona inaan bedelno hawsha, kaliya waxaan u baahanahay inaan u bedelno gidaarka mid caadi ah.
Haddii qaar idinka mid ahi ay doonayaan inay hubiyaan haddii cayayaankaani uu ku jiro noocyo ka hor 9.3 ama kuwa cusub 9.3.2 betas, Xor ayaad u tahay inaad sidaa sameysid iyo habka, nooga tag khibradaada faallooyinka
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Sida loo sameeyo galkaaga wareega (Iyadoo aan lahayn Jailbreak)
Haa, cayayaanka waa laga faa'iideysan karaa macruufka 9.3.2 beta (nooca ugu dambeeyay ee la heli karo)
Wanaagsan in la ogaado 😛 Aad baad ugu mahadsan tihiin soo tabintaada!
Gabi ahaanba waa wax aan macquul aheyn in lagu arko fiidiyowga iPhone, ama MacBook ...
Maxaad u dhigi weyday xuub caadi ah YouTube-ka?
Ma aqaan sida aad u sameyso laakiin waxaan fiidiyoow ka helaa YouTube-ka.
Mar kasta oo uu i weydiiyo haddii aan doonayo inaan ka furo fiidiyowgan barnaamijka YouTube-ka.
Ku samee cilmi baaris ku saabsan iPhone-kaaga waxaadna arki doontaa inay shaqeyso.
Hadana hadaadan heli karin, sii xoogaa qasabado ah geeska midig ee hoose ee fiidiyaha 😉
Waad salaaman tihiin. Haa way shaqaysaa sifiican betasyada cusub… Waad ku mahadsantahay caarada!
Ku jawaab x3xar
Ugu dambeyntii waxaan awooday inaan ka saaro faylalka wareega wareega! Waxay igu lahaayeen waalan!
Tani way igu dhacday aniga xitaa Apple ma ogeyn sababta https://www.youtube.com/watch?v=QkF3xgWphng
Ku jawaab Pixelated
Shaqaale Apple ah ayaa meydkiisa laga helay qolka shirarka ee xafiisyada Apple
Khariidadaha Google ayaa inna ogeysiinaya waqtiga ay qaadan doonto in aan ku noqonno guriga ama shaqada